Wararka - Halista iyo ka hortagga mashaariicda tamarta dabaysha ee caalamiga ah
Halista iyo ka hortagga mashaariicda tamarta dabaysha ee caalamiga ah
Wararka Shabakadda Awoodda Dabaysha: Hindisaha “Suunka iyo Wadada” ayaa ka helay jawaabo togan waddammada jidka mara. Maaddaama uu yahay soosaaraha ugu weyn iyo macaamilka tamarta la cusboonaysiin karo, Shiinaha ayaa si isa soo taraysa uga qayb qaadanaya iskaashiga awoodda tamarta dabaysha ee caalamiga ah.
Shirkadaha tamarta dabaysha ee Shiinaha ayaa si firfircoon uga qaybqaatay tartan caalami ah iyo iskaashi, waxay kor u qaadeen warshado faa'iido leh si ay u tagaan caalamka, waxayna ogaadeen dhammaan silsiladda dhoofinta warshadaha tamarta dabaysha laga bilaabo maalgashiga, iibinta qalabka, hawlgalka iyo dayactirka adeegyada guud, waxayna gaareen natiijooyin togan .
Laakiin waa inaan sidoo kale aragnaa iyadoo kororka mashaariicda tamarta dabaysha caalamiga ah ee shirkadaha Shiinaha, khataraha la xiriira sicirka sarrifka, sharciyada iyo qawaaniinta, dakhliga, iyo siyaasaddu ay sidoo kale la socon doonaan. Sida wanaagsan ee wax loo barto, loo fahmo, loona ilaaliyo khatarahaas loona yareeyo khasaaraha aan loo baahnayn ayaa muhiimad weyn u leh shirkadaha gudaha si loo hagaajiyo tartankooda caalamiga ah.
Warqadani waxay samaysaa falanqaynta halista iyo maareynta halista iyadoo la baranayo mashruuca Koonfur Afrika ee Shirkadda A ay maalgeliso dhoofinta qalabka wadista, waxayna soo jeedinaysaa maaraynta khatarta iyo talooyinka xakamaynta warshadaha tamarta dabaysha ee geedi socodka adduunka, waxayna ku dadaaleysaa inay kaalin wax ku ool ah ka qaadato horumarka caafimaadka leh oo waara ee hawlgalka caalamiga ah ee warshadaha tamarta dabaysha ee Shiinaha.
1. Qaababka iyo halista mashaariicda tamarta dabaysha ee caalamiga ah
(1) Dhismaha beeraha dabaysha ee caalamiga ah ayaa inta badan qaata habka EPC
Mashaariicda tamarta dabaysha ee caalamiga ahi waxay leeyihiin habab badan, sida qaabka “naqshadaynta-dhismaha” loogu aaminay hal shirkad si ay u fuliso; tusaale kale waa habka “injineernimada EPC”, kaas oo ku lug leh qandaraas bixinta inta badan la -tashiga naqshadaynta, soo iibinta qalabka, iyo dhismaha isku mar; iyo Sida ku cad fikradda wareegga nolosha oo dhan ee mashruuca, naqshada, dhismaha iyo hawlgalka mashruuca waxaa loo dhiibayaa qandaraasle si uu u hirgeliyo.
Isku -darka astaamaha mashaariicda korontada dabaysha, mashaariicda tamarta dabaysha ee caalamiga ahi waxay inta badan qaataan qaabka qandaraaska guud ee EPC, taas oo ah, qandaraasluhu wuxuu siiyaa milkiilaha adeegyo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin naqshadeynta, dhismaha, soo iibinta qalabka, rakibidda iyo hawlgelinta, dhammaystirka, shabakadda ganacsiga -koronto ku xiran, iyo wareejin ilaa dhammaadka muddada dammaanadda. Qaabkan, mulkiiluhu wuxuu kaliya si toos ah iyo maareynta mashruuca u fuliyaa mashruuca, qandaraasluhu wuxuu qaataa mas'uuliyado iyo khataro waaweyn.
Dhismaha beerta dabaysha ee mashruuca Shirkadda A ee Koonfur Afrika ayaa qaatay qaabka qandaraaska guud ee EPC.
(2) Halista Qandaraaslayaasha guud ee EPC
Sababtoo ah mashaariicda qandaraasyada shisheeye waxaa ku jira khataro ay ka mid yihiin xaaladda siyaasadeed iyo dhaqaale ee waddanka uu mashruucu ku yaal, siyaasadaha, sharciyada iyo xeerarka la xiriira soo dejinta, dhoofinta, raasamaalka iyo shaqada, iyo tallaabooyinka xakamaynta sarifka lacagaha qalaad, oo laga yaabo inay sidoo kale la kulmaan juquraafi ahaan aan la aqoon iyo xaaladaha cimilada, iyo farsamooyin kala duwan. Shuruudaha iyo qawaaniinta, iyo sidoo kale xidhiidhka waaxaha dawladda hoose iyo arrimo kale, sidaa darteed waxyaabaha halista ahi waxay leeyihiin baaxad ballaadhan, kuwaas oo inta badan loo qaybin karo khataraha siyaasadeed, khataraha dhaqaale, khataraha farsamo, khataraha ganacsiga iyo xidhiidhka dadweynaha, iyo khataraha maamulka .
1. Khatarta siyaasadeed
Asalka siyaasadeed ee dalka iyo gobolka aan degganayn ee suuqa qandaraasku ku yaal ayaa laga yaabaa inay khasaare weyn u keento qandaraaslaha. Mashruuca Koonfur Afrika wuxuu xoojiyay baaritaanka iyo cilmi-baarista marxaladda go'aan-qaadashada: Koonfur Afrika waxay xiriir wanaagsan la leedahay dalalka deriska ah, mana jiraan khataro qarsoon oo muuqda oo amniga dibadda ah; Ganacsiga laba geesoodka ah ee Shiinaha iyo Koonfur Afrika ayaa si degdeg ah u horumaray, heshiisyada ilaalinta ee khuseeyaana waa kuwo wanaagsan. Si kastaba ha ahaatee, arrinta amniga bulshada ee Koonfur Afrika ayaa ah halis siyaasadeed oo muhiim ah oo wajaheysa mashruuca. Qandaraaslaha guud ee EPC wuxuu shaqaaleysiiyaa shaqaale badan oo hawsha fulinta mashruuca ah, waxaana la handadayaa badbaadada shaqsiyeed iyo midda shaqaalaha iyo shaqaalaha maamulka, taasoo u baahan in si dhab ah loo qaato.
Intaa waxaa dheer, khataraha juqraafiyeed ee iman kara, isku dhacyada siyaasadeed, iyo isbeddellada nidaamku waxay saamayn doonaan sii wadidda siyaasadaha iyo hirgelinta qandaraasyada. Colaadaha qowmiyadaha iyo diimaha ayaa khatar qarsoon ku haya amniga shaqaalaha goobta jooga.
2. Khataraha dhaqaale
Khatarta dhaqaale waxay inta badan tilmaamaysaa xaaladda dhaqaale ee qandaraaslaha, xoogga dhaqaale ee waddanka uu mashruucu ku yaal, iyo awoodda lagu xallinayo dhibaatooyinka dhaqaale, gaar ahaan xagga bixinta. Waxaa ka mid ah dhinacyo dhowr ah: sicir -bararka, khatarta sarrifka lacagaha qalaad, ilaalinta, takoorka canshuurta, awoodda lacag -la'aanta ee milkiilayaasha, iyo dib -u -dhaca bixinta.
Mashruuca Koonfur Afrika, qiimaha korontada waxaa lagu helaa rand maadaama lacagta dejinta, iyo kharashaadka soo -iibinta qalabka ee mashruuca lagu dejiyo doolarka Mareykanka. Waxaa jira halis sarrif oo gaar ah. Khasaaraha ka dhasha is -beddellada sarrifka ayaa si fudud u dhaafi kara dakhliga maalgelinta mashruuca. Mashruuca Koonfur Afrika ayaa ku guulaystay wareegii saddexaad ee qandaraasyada mashaariicda tamarta cusub oo ay dawladda Koonfur Afrika u soo martay qandaraas. Loolanka qiimaha daran dartiis, habka diyaarinta qorshaha qandaraaska ee gelinta wax soo saarka ayaa dheer, waxaana jirta halis ah in la waayo qalabka iyo adeegyada marawaxadaha dabaysha.
3. Khataraha farsamo
Marka lagu daro xaaladaha juqraafiyeed, xaaladaha biyaha iyo cimilada, sahayda qalabka, sahayda qalabka, arrimaha gaadiidka, khataraha isku xidhka shabakadda, tilmaamaha farsamo, iwm. Khatarta ugu weyn ee farsamo ee soo wajahday mashaariicda korontada dabaysha ee caalamiga ahi waa halista isku xidhka shabakadda. Awoodda la rakibay ee awoodda dabaysha ee Koonfur Afrika oo lagu daray shabakadda korontada ayaa si xawli ah u sii kordhaysa, saamaynta marawaxadaha dabayshu ku leeyihiin nidaamka korontada ayaa sii kordhaysa, iyo shirkadaha shabakadda korontadu waxay sii wadaan hagaajinta tilmaamaha isku xidhka shabakadda. Intaa waxaa dheer, si loo kordhiyo heerka isticmaalka tamarta dabaysha, munaaradaha sare iyo garbaha dhaadheer ayaa ah isbeddellada warshadaha.
Cilmi-baarista iyo adeegsiga marawaxadaha dabaysha dhaadheer ee wadammada shisheeye waa xilli hore, iyo munaarado dhaadheer oo u dhexeeya 120 mitir ilaa 160 mitir ayaa hawlgal ganacsi loo geliyay kooxo. dalkaygu wuxuu ku jiraa marxalad curdin ah oo leh khataro farsamo oo la xiriira arrimo farsamo oo taxane ah sida istaraatijiyadda xakamaynta cutubka, gaadiidka, rakibidda, iyo dhismaha la xiriira munaarado dhaadheer. Sababtoo ah xajmiga sii kordhaya ee baalasha, waxaa jira dhibaatooyin waxyeello ama kuuskuus ah inta lagu jiro gaadiidka mashruuca, iyo dayactirka baalasha ee mashaariicda dibadda waxay keeni doontaa halista luminta korontada iyo kharashaadka oo kordha.
Waqtiga dhejinta: Sep-15-2021
Farshaxanka Darbiga Birta, Coat Hanger Rack Hooks, Qabanqaabiyaha Hook Furaha, Qabatooyinka Furaha Furaha, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Qaansarka Warshada Darbiga,